अचम्मको त्यो नशा : म स्कुटिको चाबी लिएर पार्किङमा गएँ…… - Mitho Khabar
June 24, 2022 mithokhabarLeaveaComment on अचम्मको त्यो नशा : म स्कुटिको चाबी लिएर पार्किङमा गएँ……
अचम्मको नशा:म बिहान ओछ्यान बाट उठे, अचानक मेरो छाती दुख्न थाल्यो। मलाई मुटुको बिरामी त भएको हैन? यस्तो सोच्दै म अर्को कोठा बैठक रुममा गए। त्यहा पुरै परिवार आआफ्नो मोबाइलमा ब्यस्त थिए ।
मैले श्रीमतिलाई हेर्दै भने: आज छाती अरुदिन भन्दा धेरै नै दुखिरहेको छ .. डाक्टर सँग परामर्श लिएर आउछु ।हुन्छ जाँदा बिस्तारै जानुहोस .. त्यस्तो केहि परेमा कल गर्नु.. श्रीमतिले आफ्नो मोबाइलमा औंला चलाउदै भनिन् ।म स्कुटिको चाबी लिएर पार्किङमा गएँ , मेरो शरीरमा पसिना धेरै आइरहेको थियो.. स्कुटी स्ट्राट भैरहेको थिएन…,
त्यही समय. हाम्रो घरमा काम गर्ने हरि साइकल लिएर आयो ..साइकल लाइ चाबी लगाउने बित्तिकै उसले मलाई अगाडि उभिएको देख्यो .. के भयो सर , स्कुटी स्ट्राट भएन?
मैले भने: अँ , अघि देखि स्ट्राट गर्न खोजेको स्ट्राट नै भएन ।
तपाईंको स्वास्थ ठिक छैन जस्तो छ हजुर .. तपाईंको शरीर बाट किन यति धेरै परिना आको?सर: यस्तो हालतमा स्कुटिलाई किक मार्नु हुँदैन .. म किक मारेर स्ट्राट गरिदिन्छु । हरिले एकै किकमा स्कुटि स्ट्राट गरिदियो । र भन्यो: सर एक्लै जान लाग्नुभाको?
मैले भने हो ।
उसले भन्यो:- यस्तो समयमा एक्लै हिड्न हुदैन बस्नुहोस म पुर्याइदिन्छु ।मैले भने: तिमिलाई स्कुटी चलाउन आउँछ ?सर: “मसंग गाडिको लाइसेन्स छ … चिन्ता नगर्नुहोस् ..” मलाई समातेर पछाडि बस्नुहोस ।नजिकै थापाथली नर्भिक हस्पिटलमा हामी पुग्यौं । हरि दौडिएर भित्र गयो , र व्हिलचेयर लिएर बाहिर आयो ।
सर.. अब नहिड्नुहोस यश कुर्सीमा बस्नुहोस..।
हरिको मोबाइलमा लगातार फोन आइरहेको थियो , मैले गेस गरे सायद मेरो श्रीमतिले गरेको हुनुपर्छ यतिबेलासम्म किन काम गर्न आइनस भनेर ।
हरिले मलाई डाक्टरले गर्नुपर्ने व्यबहार जस्तै गरिरहेको थियो। उसलाई मैले नभनेपनी बुझिसकेको थियो कि मलाई हार्टअटैक को समस्या छ भनेर । लिफ्ट हुँदै व्हिलचेयर ICU हुने ठाउँ तिर लिएर गयो..।
डाक्टरको टिम तयारी थिए , मेरो समस्या सुनेपछि सबै परिक्षण चाँडै गरियो..।डाक्टर हरुले भने: तपाईं समयमानै आइपुग्नुभयो .. व्हिलचेयर प्रयोग गर्नुभएको रहेछ .. यो तपाईंको लागि धेरै फाइदाजनक भयो।
अब अरुको बाटो कुर्नु भनेको तपाईंको लागि धेरै हानिकारक छ, त्यसैले ढिलो नगरी मुटुको अप्रेसन गरि ब्लोकेज बाट छिटै छुटकारा पाउनुहोस् ।
यो फर्ममा तपाईंको आफन्तको हस्ताक्षर चाहिन्छ ।मैले भने: हरि तिमिलाइ हस्ताक्षर गर्न आउँछ..?उसले भन्यो: “सर, यति ठुलो जिम्मेवारी ममाथि नलगाउनुहोस।”
हरि तिम्रो कुनै जिम्मेवारी छैन .. तिमी मेरो रगतको नाता नभएपनी मैले केहि नभनी मलाई यहाँसम्म ल्याएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छौँ । त्यो जिम्मेवारी बास्तबमा मेरो परिवारको थियो । एउटा थप जिम्मेवारी पूरा गरिदेउ हरि। म तल लेखिदिन्छु अप्रेसन गर्दा भुल बस केहि भएमा म आफै जिम्मेवारी हुनेछु. भनी लेखिदिन्छु ।
यति भनेपछि हरिले हस्ताक्षर गर्‍यो ।
अनि घरमा फोन गरेर मेरो बारेमा सुनाइदेउ .. ।यत्तिकैमा हरिको मोबाइलमा मेरो श्रीमतीको फोन आयो; उ चुपचाप उनको कुरा सुनिरह्यो..।
केहि समयपछि हरिले जवाफ दियो: मेडम मेरो तलब काट्ने भएपनि काट्नुस , घरबाट निकाल्ने भएपनि निकाल्नुस तर यहाँ अप्रेसन सुरु गर्नु अगाडि नै अस्पताल आइपुग्नुहोस । मेडम मैले सरलाई यहाँ थापाथली नर्भिक हस्पिटल लिएर आको छु , डाक्टरले अप्रेसनको तयारी गर्दैछन् छिटो आउनुहोस…।
मैले भने: हरि, घरबाट फोन आको थ्यो हो?
हरि: हो , हजुर ।
मनमनै श्रीमती बारेमा सोचे तिमिले कस्तो तलब काट्ने कुरा गरेकी? तिमिले कस्तो घरबाट निकाल्ने कुरा गरेकी.? आँखा भरि टिलपिल आँसु पारेर हरिको काँधमा हात राखेर भने: बाबू चिन्ता नगर ।म तिमिलाई एउटा संस्थामा पठाइदिन्छुत्यहा बृद्ध हरुलाई सहारा दिइन्छ्। त्यहा तिमी जस्तै ब्यक्तिको आवश्यक छ ।तिम्रो काम भाँडा माज्ने कपड़ा धुने होईन , तिम्रो काम त समाज सेवाको हो। हरि त्यहाँ तिमिले राम्रो तलब पाउनेछौं । त्यसैले चिन्ता नगर ।
अप्रेसन पछि होसमा आएँ ..मेरो अगाडि मेरो पूरा परिवार नतमस्तक शिर निहुरि पारेर उभिएका थिए.. । मैले आँखाभरि आँसु पारेर भने: हरि कहाँ छ .. ?
श्रीमतिले भनिन्: उ अहिले भर्खर मसँग बिदा मागेर उसको गाउँ गयो.. ।
भन्दै थियो उसको बुबा हार्ट अटैक भएर स्वर्गवास हुनुभयो.. १५ दिनपछि आउछु भनेर गको छ ।मैले बुझे कि उसले मभित्र उसको बुबा देखि रहेको थियो । हे भगवान मलाई बचाएर उसको बुबालाई लिएर जानुभयो?मेरो पुरै परिवार हात जोडेर मसँग माफी मागिरहेका थिए ।
एउटा मोबाइलको लतले आफ्नो घर भित्रको मान्छेलाई कती टाढा पुर्याउछ । घरका पुरै परिवार आआफ्नो कोठामा मोबाइलमा ब्यस्त हुन्छन् , को कहाँ गयो घरमा के भैरहेको छ कसैलाई वास्ता हुँदैन । मोबाइल नै कलह’को कारण बनेको छ,
आज घरमा के पाक्यो सासुले के भनिन्, जेठाजु ले के भने, ससुराले के भने, घरका सानातिना कुराहरु नयाँ बुहारीले तुरुन्तै माइतीघर आमा बुबालाई सुनाउछिन । र माइतीको आमाको सल्लाहमा घर परिवारमा आमाले सिकाए अनुसार व्यबहार गर्दै जान्छिन.. र फलस्वरूप कि. लोग्ने स्वानिमा झगडा भएर छोराछोरी च्यापेर माइतीघर गएर माइतिले सिकाए बमोजिम बस्छिन कि बिसौंबर्ष श्रीमानको घरमा बस्दा पनि घरका पूरा परिवारलाई रिझाउन सक्दिनन ।
डाक्टरले आएर भने: सबैभन्दा अगाडि भन्नुहोस् त हरि भाइ तपाईंको नाताले के पर्नुहुन्छ?मैले भने: डाक्टर साभ, कुनै-कुनै सम्बन्धको नाम र गहिराईमा नगएकै राम्रो हुन्छ..। सम्बन्धको गरिमा रहन्छ.., । अहिले यत्तिनै भन्छु कि उ मेरो आपतमा भगवान बनेर आयो ।
छोरा राकेश ले भन्यो: हामिलाई माफ गर्नुहोस् बाबा .. हरिले हाम्रो कर्तव्य पूरा गर्यो । यो हामी छोराछोरीको लागि लज्जास्पद छ । अब देखि यस्तो गल्ती आउँदा दिनहरूमा कहिल्यै दोहोर्‍याउने छैनौं ।
छोरा कारबाही र सल्लाह सुझाव त मान्छेलाई दिनकै लागि हुन्छ ।जब लिने समय आउँछ मान्छेहरू तर्किने कोशिश गर्छन् । अब रह्यो मोबाइलको कुरा..
छोरा निर्जीव खेलौनाले जिउँदो खेलौना लाई दास बनाएको छ। यसको सिमित सदुपयोग गर्ने बेला आएको छ ।
यदि होईन भने;
परिवार समाज र राष्ट्रले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्नेछ र यसको मुल्य चुकाउन तयार हुनुपर्ने छ । शिक्षा: छोराछोरीलाई ठुलो अफिसर वा ब्यापारी बनाउनुभन्दा असल मानव बनाउनुहोस् । घरमा मोबाइल कति समय कुन समयमा हेर्ने हो, त्यसको समय निर्धारण गर्नुहोस् । छोराछोरी पढ्ने समय आफू पनि मोबाइल बन्द गरेर केहि पढ्ने कोशिश गर्नुहोस । सकिन्छ भने बेलुका ८ बजेबाट उता ईन्टरनेट बन्द गरेर छोराछोरी तथा घर परिवारलाई समय दिनुहोस् ।।
साभार : सामाजिक संजाल
जब अमिताभ बच्चनकी नातिनी यस्तो यौ न समस्या लिएर डाक्टरकोमा गइन्
माल्टामा कार्यरत नेपालीको धमाधम भिसा रद्द
आज वैशाख २७ गते मंगलवार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल
May 10, 2022 mithokhabar
लुकिरहेको अवस्थामा बानेश्वरबाट पक्राउ परे रञ्जन कोइराला
May 28, 2022 mithokhabar